'' တစ်ယောက်ယောက်ကဘီဗာရာဂျီနိုပြောတာလား '' ရဲ့နောက်ကွယ်ကကောင်တီမြို့ဆင်ခြေဖုံးကိုကျနော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်။ TIKTOK - သတင်း
TikTok '' တစ်ယောက်ယောက်က beveragino လို့ပြောခဲ့သလား '' ရဲ့နောက်ကွယ်ကကောင်တီ townhouse ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်
လတ်ဆတ်ကောလိပ်တွင် Freshers 'Week ၌စစ်ပွဲများပြုလုပ်စဉ်ကအကောင်းဆုံး post-it note အနုပညာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရှိသူတွေကသူတို့နဲ့အတူကောင်တီ townhouse ၁၀၀ ရှိခဲ့တယ် တစ်စုံတစ် ဦး က beveragnio လို့ပြောခဲ့သလား TikTok အချို့လူများကယုံကြည်သူများသည် Furness တိုက်ခန်းမှ Elmo အနုပညာလက်ရာများဖြစ်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Townhouse 100 တွင်လတ်ဆတ်သော ၁၂ ခုပါဝင်သည်။ Hannah, Rowan, Katie, Annie, Floss, Joely, Evie, Rebecca, Abdul, Josh, Nathan နှင့် Brad ။ Lancaster Tab ကသူတို့အနိုင်ရတဲ့ TikTok အကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀ မှာလတ်ဆတ်တဲ့အရာတွေအကြောင်းသူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။
ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ထားတဲ့အကောင့်ကိုဟန္နက - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါတို့အနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်မသိခဲ့ဘူး။ Post-it ၏မှတ်စုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ခန်းတွင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအဖြစ်တင်လိုက်ပြီး TikTok ကိုလုပ်ပြီးကတည်းက၎င်းကိုပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ခရိုင် Instagram ကို ချောချောမွေ့မွေ့ပေါ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမေ့သွားသည်အထိ - ၎င်းသည်မည်မျှအာရုံစူးစိုက်နေသည်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။
အနိုင်ရသည်မှာလွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဗ်ဒူကပြောကြားခဲ့သည်မှာသူကပြိုင်ပွဲအတွက်တောင်မှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သလိုခံစားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ Townhouse ကသူတို့ post-it မှတ်စုအနုပညာလက်ရာများနှင့် TikTik မူလကပြားချပ်ချပ်အဖြစ်မူလကလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်စတင်သောအခါအပြိုင်ပွဲသို့ပင်တင်သွင်းဖို့ဘယ်တော့မှဘူး။
သိသာထင်ရှားတဲ့ Elmo Flat ကအာရုံစိုက်မှုအများကြီးရခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ TikTok သရဖူကိုခံထိုက်တယ်လို့ခံစားရလား။
လူတိုင်းက Elmo အနုပညာသည်လုံးဝမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးကြောင်းအားလုံးသဘောတူကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Post-it ၀ င်းဒိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်ကြသည် (သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ပြုသည်), သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုထိုက်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ငါဘယ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးမစနိုင်ဘူး။
ရေဗက္ကာကဆက်ပြောသည် - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တာလို့ထင်တယ်၊ အဲလ်moတစ်ခုရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကသူတို့ရှုံးပြီးတဲ့နောက်သူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ kill bit ဖြစ်ပြီးငါတို့မရှိရင်အရာတော့မဟုတ်ဘူး။
သူတို့ရဲ့ TikTok ကတစ် ဦး ရူ့အဖြစ်ပြိုင်ပွဲတင်သွင်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့ TikTok, အစပိုင်းတွင်မည်သည့်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင် outcompete ဖို့ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရအဖြစ် Katie ရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီအပင်အနိုင်ရရှိပိုကောင်းစေ!
Rowan က Lancaster Tab ကိုပြောကြားရာတွင် Elmo တိုက်ခန်းသည် TikTok သည်ဟာသတန်ဖိုးထက်များသော်လည်းအနိုင်ရသင့်သည်ဟုထင်သောကြောင့်သူမသည်အနည်းငယ်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
အဘယ်အရာကို Seagull ကိုစားလိုကြဘူး
သင်၏ Townhouse ဤကျော်ကျော်ကပ်လျက်ရှိသည်တူသောကြောင့်ခံစားရသလား
ဟန္နနှင့်ရိုဝန်းတို့နှစ် ဦး စလုံးကသူတို့နှင့်ကက်တီတို့သည်အစပိုင်းတွင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အနှောင်အဖွဲ့အဖြစ်သဘောတူကြသည်။ ယခုသူအိမ်တော်၌အပြေးဟာသဖြစ်လာသည်သော်လည်းကျိန်းသေသူတို့ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရခြင်းနှင့်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူတစ်ခုလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွဆောင်ခဲ့တော်မူပြီလည်းအသစ်အဆန်းအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဟန္နကလည်းထပ်မံထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသေချာပေါက်ကူညီပေးသည်ဟုခံစားရသည်။ ပြားချပ်ချပ်တစ်လုံးလုံးအနေနှင့်၎င်းတို့အားလုံးသည် (ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်) ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ရေးခဲ့သည့်အရာများကိုမြင်သောအခါလူတိုင်းရယ်ကြလေသည်။
Brad Townhouse အတွက်တည်းခိုနှင့်အတူတကွသောက်သုံးနေတဲ့ပြားချပ်ချပ်အဖြစ်ပိုမိုကပ်လျက်တည်ရှိပေမယ့်ဒီနှစ်လတ်ဆတ်ဖြစ်ခြင်း (သူရိုးသားဖြစ်ခြင်းလျှင်) နည်းနည်း shit ခဲ့ထင်ခဲ့တယ်။ သူဆက်ပြောသည်မှာတည်းခိုရန်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းသည်သူတို့ကိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအဖြစ် ပို၍ နီးကပ်စေသည်။
ဟန္နယခုနှစ်လတ်ဆတ်သောဖြစ်ခြင်းကျိန်းသေဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့သည်, သင် uni မှာလတ်ဆတ်သောတူလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။
အိမ်၏ TikToker ကဘယ်သူလဲ။
ဟန္နနှင့်အီဗီတို့သည်မြို့တွင်းအိမ်၏ TikTokers ဖြစ်သည်။ Rowan က“ ဟန္နဟာ TikTok ကိုစွဲလမ်းနေပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုးကားထားတယ်။ Katie ကဟန္နသည် TikToks များကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ဟာသဟာသဟုထပ်မံပြောဆိုသည်။
ကေတီက“ ငါပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာတခြားသူတွေနည်းတူထပ်တူပြုမူတာကိုတွေ့ရသလိုငါပထမနေ့မှာဟင်းကိုပြတင်းပေါက်မှာတင်လိုက်တယ်။ တစ်ရက်သူတို့ပျင်းလာတဲ့အခါ Townhouse ကငါတို့ရဲ့ Lounge ပြတင်းပေါက်မှာပိုကြီးတဲ့ display လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Lancaster ကိုမသွားခင်သူမအိမ်မှာမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့စကားစုကဒီဗီဒီယိုဟာသူငယ်ချင်းတွေဗွီဒီယိုလေးကိုသဘောကျပြီးသူတို့တွေလိုပဲရယ်စရာကောင်းတယ်လို့သူမသိတယ်။ သူမကတိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုသူမက beveragino လို့ပြောခဲ့တာပဲပထမ ဦး ဆုံးပြောတာကသူကပဲ။ ကိုးကားပါ၊ ဒါကငါတို့မျှဝေခဲ့တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဟာသမျိုးဖြစ်လို့ပြတင်းပေါက်နဲ့သင့်တော်ပုံရသည်။
ဤတွင် Lancaster ရဲ့အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝတ်စုံ 2020 အားလုံးရှိပါတယ်
Lancs Uni ရဲ့ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးသောအဒေါ်ကသင်၏ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်ဒီနေရာကိုရောက်လာသည်
VOTE: Lancaster University ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအဆောက်အ ဦး ကဘာလဲ။
Florence Pugh ကဘယ်သူလဲ။ Scrubs မှ JD နှင့်သူမ၏အသက်ကွာဟမှုကိုကာကွယ်သည့်ကြယ်သည်
PSA: ထီးအကယ်ဒမီမှနံပါတ်ငါးသည်ဂီတကိုပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်
တွေ့ဆုံ Will Will Higginson: ချယ်လ်ဆီးအတွက် Made အပေါ်ဒရာမာသို့မှီဝဲတဲ့သူမော်ဒယ်
Russell Watson သည်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုမှအဘယ်ကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသနည်း။
Love Island မုသားရှာဖွေစက်သည်တိကျခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
ဘုရားရေ!!! ASOS သည်ကျောင်းသားများကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအားကြာသပတေးနေ့အထိပေးသည်